के यो गर्भवती हुँदा सिम्बाल्टा लिन सुरक्षित छ? - औषधि जानकारी | सेप्टेम्बर 2021
कम्पनी, समाचार मनोरञ्जन कम्पनी, चेकआउट स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार समाचार कल्याण प्रेस स्वास्थ्य समुदाय, कम्पनी औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा खेलहरु औषधि जानकारी औषधि जानकारी, समाचार भारी खेल कम्पनी
मुख्य >> औषधि जानकारी >> के यो गर्भवती हुँदा सिम्बाल्टा लिन सुरक्षित छ?
ड्रग जानकारी मातृ मामिलाहरू
गर्भावस्था भारी हुन सक्छ। तपाईंको शरीरमा परिवर्तनहरू छन्, प्रायः धेरै मतली, र केवल प्यारेन्टहुडको लागि तयारीको तनाव। र औषधी लिने महिलाहरूका लागि कि त उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्य वा पीडाबाट राहत पाउन, अर्को प्रश्न यो समीकरणमा प्रवेश गर्छ, के मेरो प्रिस्क्रिप्शन मेरो बच्चाको लागि सुरक्षित छ?
गर्भावस्थामा Rx लिनु असाधारण कुरा होईन— एफडीए अनुसार , Pregnant०% गर्भवती महिलाहरूले कम्तिमा एक औषधि लिन्छन्। तर, सबै औषधिहरू गर्भवती र स्तनपान गराउने महिलाहरूको लागि सुरक्षित हुँदैन।
सिम्बल्टा चिन्ता र उदासीनता, र दीर्घकालीन पीडाको उपचार गर्न प्रयोग गरिने एक सेरोटोनिन-नोरपिनेफ्रिन रिअपटेक इनहिबिटर (SNRI) हो। गर्भावस्था को समयमा, डिप्रेसन र चिन्ता बढ्न सक्छ , महिलालाई उनीहरूका विकल्पहरू जान्नको लागि यो अझ महत्वपूर्ण बनाउँदछ।
के यो गर्भावस्थामा Cymbalta लिन सुरक्षित छ?
छोटो उत्तर हो: यो निर्भर गर्दछ। सबै औषधिहरू जस्तै, यो तुरून्तै तपाईको डाक्टरसँग परामर्श गर्न आवश्यक छ यदि तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ वा हुनुहुन्छ भने। को उपयोग सिम्बल्टा गर्भावस्था को दौरान प्राय केस केस आधारमा निर्णय गरिन्छ। यो गर्भावस्थामा सामान्यतया प्रयोग गरिदैन जबसम्म लाभहरु भ्रुणको लागि जोखिम भन्दा बढी हुन्छन् Kecia Gaither , एमडी, MPH, एक OB-GYN र NYC स्वास्थ्य + अस्पताल / लिंकन मा Perinatal सेवाहरु को निर्देशक।
त्यहाँ अन्य antidepressants, भन्दा Cymbalta र गर्भावस्था मा कम अनुसन्धान छ जोलोफ्ट । प्रतिकूल प्रभावको लागि सम्भाव्यता रहेको छ, र यो तेस्रो त्रैमासिकमा contraindication छ। यदि एक बिरामीले गर्भावस्था अघि चिन्ता वा उदासिनताका लागि साइम्बाल्टा लिइरहेको छ, र यसले उनीहरूको लागि राम्रो काम गरिरहेको छ भने, म सिफारिस गर्दछु कि उनीहरूले यसलाई निरन्तरता दिए, कार्लाइ सिन्डर , MD, NYC मा निजी अभ्यासमा प्रजनन र perinatal मनोचिकित्सक। यदि त्यहाँ कुनै अन्य उपचार विकल्पहरू छैनन्, अन्य औषधिहरू सहित, तपाईंको स्वास्थ्यसेवाले तपाईंलाई सिम्बाल्टा लिने सुझाव दिन सक्छ, सम्भावित प्रतिकूल प्रभावहरूको बाबजुद। गर्भावस्थामा सम्झौता गरिएको मानसिक स्वास्थ्यले आमा र उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई महत्वपूर्ण जोखिम प्रदान गर्दछ।
तपाइँ एकै समयमा lisinopril र losartan लिन सक्नुहुन्छ
त्यसो भएमा, सिम्बाल्टा सम्भवतः तपाईंको औषधिले सिफारिस गरेको पहिलो औषधी होईन यदि तपाईंले डिप्रेसनका लक्षणहरू अनुभव गर्न थाल्नुभयो भने समयमा गर्भावस्था अर्थ, तपाइँ पहिलो पटक गर्भावस्थाको समयमा Cymbalta प्रयोग गर्न सुरु गर्नु हुँदैन। Zoloft वा Celexa जस्ता चयनित सेरोटोनिन पुनःअपटेक इनहिबिटरहरू (SSRIs) अधिक सामान्य रूपमा निर्धारित गरिन्छ किनकि थप अनुसन्धानले उनीहरूको सुरक्षा प्रदर्शन गर्दछ।
Cymbalta र गर्भावस्था को जोखिम के हो?
किनकि यस औषधिमा डाटा सीमित छ, जोखिमहरू केही अज्ञात छन्। अवस्थित अनुसन्धानले देखाउँदछ कि तेस्रो त्रैमासिकमा एसएनआरआईको सम्पर्कमा आएका शिशुहरूले साइड इफेक्टहरू अनुभव गर्न सक्दछन्: साइनोसिस, एपनिया, श्वासप्रश्वास, दौड, तापमान अस्थिरता, खुवाउन कठिनाई, हाइपोग्लाइसीमिया, चिन्ता, चिढचिलोपन, निरन्तर रोइरहनु, वा थरथर काम्ने। त्यहाँ छिटो प्रसव श्रम, गर्भपात, गर्भवती उमेरका बच्चाहरूका लागि सानो, र उच्च रक्तचाप जस्ता गर्भावस्था जटिलताको रिपोर्टहरू छन् - यद्यपि यो औषधिको कारणले हो वा अनुमानमा छोडियो, डा। गाएरे भन्छन्।
एन्टीडिप्रेसन्ट्स तेस्रो त्रैमासिकमा लिइयो बच्चा जन्माए पछि एक महिना सम्म अस्थायी फिर्ती लक्षण अनुभव को जोखिम पनि प्रस्तुत गर्न सक्छ। यी अस्थायी फिर्ती लक्षणहरू, को रूपमा चिनिन्छ गरीब नवजात अनुकूलन सिन्ड्रोम , चर्कोपन, बेचैनी, चिढचिढोपन, मांसपेशी टोन बढेको, र छिटो सास फेर्न सक्छ र एसएनआरआई र एसएसआरआईमा महिलामा जन्मेका २ of% देखि %०% बच्चाहरूको लागि देखा पर्न सक्छ। जब यो डरलाग्दो देखिन्छ, डा। स्नाइडरले बिरामीहरूलाई आश्वासन दिन्छ कि यो पूर्ण रूपमा क्षणिक हो। यद्यपि, केहि केसहरूमा यसले आईसीयू प्रवेश गराउन सक्दछ, अभिभावकीय बन्धनलाई बाधक गर्न सक्दछ, वा स्तनपान रोक्न सक्छ।
अनुसन्धानले संकेत गर्दैन कि अन्तिम त्रैमासिकको दौडान एन्टिडिप्रेस्रेस प्रयोग बन्द गर्न यी लक्षणहरूको सम्भावना घट्छ। र टेपरिंग बन्द वा पूर्ण रूपमा औषधी रोक्नाले आमालाई फेरि डुब्न सक्ने खतरामा पार्छ डिप्रेसन वा गर्भावस्थाको अन्तिम महिनाहरूमा प्रसवोत्तर अवधिको अवधिमा तीव्र चिन्ताको स्तरको अनुभव गर्दै। यदि तपाईं सिम्बाल्टा लिदै हुनुहुन्छ र गर्भवती बन्नुहुन्छ भने, औषधी सिफारिसहरूको लागि मनोचिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस्।
के मलाई जन्म नियन्त्रण प्राप्त गर्न बीमा चाहिन्छ?
के गर्भावस्थामा डोज परिवर्तन गर्नुपर्छ?
धेरै परिवर्तनहरू मध्ये एक महिलाको शरीर गर्भावस्थाको समयमा हुन्छ रगतको मात्रा बढायो। ती परिवर्तनहरूको साथसाथै, एउटा सामान्य धारणा साइम्बल्टाको डोज बढाउनको लागि हुन सक्छ, तर डा। सिन्डर भन्छन कि, अधिकतर अवस्थामा बिरामीहरूले उनीहरूको खुराकलाई अनुकूलन गर्नुपर्दैन, तर कहिलेकाहिँ ती गर्दछन्। यसैले तपाईको डाक्टरसँग काम गर्न तपाईको लागि के काम गर्छ भनेर पत्ता लगाउन अत्यन्त महत्वपूर्ण छ।
यो Cymbalta मा स्तनपान गर्न सुरक्षित छ?
गर्भावस्था जस्तै, त्यहाँ स्तनपानको समयमा सिम्बाल्टाको प्रयोगमा सीमित डाटा छ। तपाईंले आफ्नो स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको साथ शिशुलाई सम्भावित जोखिमहरू तौल गर्नुपर्छ। सीमित डाटा दिएमा धेरै महिला र तिनीहरूका प्रदायकहरूले वैकल्पिक रुचाउन सक्छन्। यद्यपि, उपलब्ध अनुसन्धानले संकेत गर्दछ कि स्तन दुधमा खुराक अत्यन्त कम छ।
सामान्यतया, स्तनपानको समयमा पहिलो पटक सिम्बाल्टा लिन शुरू गर्न सिफारिस गरिदैन। डा। स्नाइडर गर्भावस्था र प्रसवोत्तर अवधि बिच एकरूपता कायम राख्न सल्लाह दिन्छन्। यदि एउटी आमाले गर्भावस्थामा केहि लिईरहेकी छिन् भने, उनी भन्छिन्, स्तनपानको क्रममा यो ठीकै हुन्छ, विशेष गरी यदि आमाले राम्ररी हेरिरहेको छ भने। शिशुलाई तन्दुरुस्ती र पर्याप्त भोजन, वजन र वजनको विकासको लागि महत्त्वपूर्ण निरीक्षण गर्न महत्त्वपूर्ण छ, विशेष गरी यदि उनीहरूले विशेष स्तनपान गराए। र, कुनै चिन्ता छ भने आफ्नो डाक्टर संग परामर्श गर्नुहोस्।
प्रसव-पश्चात आत्म-देखभाललाई प्राथमिकता दिन सम्झनुहोस्
नयाँ अभिभावकको रूपमा जीवन भारी हुन सक्छ। तर आफ्नो बच्चाको हेरचाह गर्न सक्षम हुनुको पहिलो कदम आफैलाई हेरचाह गर्नु हो। र त्यो एक राख्नु समावेश छ लगातार तालिका तपाईको औषधिको साथ, विशेष गरी मानसिक स्वास्थ्यको लागि लिईएको औषधिहरू। एउटा पिलबक्स प्रयोग गर्नुहोस्, तपाईंको फोनमा अलर्टहरू प्रयोग गर्नुहोस्, वा तपाईंको पार्टनरसँग जवाफदेहिता प्रणाली सिर्जना गर्न काम गर्नुहोस् जुन तपाईंको आमाको रूपमा तपाईंको नयाँ तालिकाको लागि काम गर्दछ।
यदि तपाइँ गर्भावस्थामा डिप्रेसन वा चिन्ताको अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ भने, यो याद गर्नु महत्वपूर्ण छ कि तपाईं एक्लो हुनुहुन्न। तपाईंको प्रदायकसँग कुरा गर्नुहोस् र एउटा समाधान फेला पार्नुहोस् जुन तपाईं र तपाईंको बच्चाको लागि उत्तम हुनेछ।
महिलाहरु को लागी5सर्वश्रेष्ठ पूर्व कसरत: तपाइँको खरीद गाइड
कसरी प्राकृतिक र चाँडै रक्तचाप कम गर्न
कती ibuprofen मँ पीठ दुखाइ को लागी लिन सक्छु
मँ गर्भावस्था मा दुखाई को लागी के लिन सक्छु?
कसरी बीमा बिना चिकित्सा हेरचाह प्राप्त गर्न
काउन्टर उपचार मा पुरुष खमीर संक्रमण
कती समय लाग्छ यो toenail कवक को उपचार गर्न को लागी